सलमान खानलाई फ्यानले यस कारण गाली गरे ! - Sagarmatha Online News Portal
सलमान खानलाई फ्यानले यस कारण गाली गरे !
एजेन्सी । अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतले झुण्डिएर आत्महत्या गरेपछि बलिउडमा नेपोटिज्ममाथि बहस भइरहेको छ । बलिउडमा गुटबन्दी र नातावाद हाबी भएको भन्दै टिप्पणी हुन थालेको छ ।
फ्यान तथा केही सेलिब्रेटीले आलिया भट, सोनाक्षी सिन्हा, करण जोहर लगायतका सेलिब्रेटीले गुटबन्दी गरेको र अरु कलाकारलाई पाखा लगाएको आरोप लगाएका छन् ।
बलिउड अभिनेता सलमान खानलाई पनि फ्यानले गाली गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा आलिया भट, सोनाक्षी सिन्हा लगायतले कमेन्ट गर्न नमिल्ने बनाएका छन् । हालै सलमानले इन्स्टाग्राममा एक पोस्ट शेयर गरेका थिए । उनले वर्कआउट गरेपछिको तस्वीर शेयर गरेका छन् ।
कतिले त सलमान खानमै ‘खुनी’ भनेरै कमेन्ट छोडेका छन् । सलमान खानको उमेर बूढो भइसकेको आरोप फ्यानले लगाएका छन् । उनको तस्वीरमा सकारात्मकभन्दा बढी नकारात्मक कमेन्ट आइरहेका छन् । धेरैले अब सलमान खानलाई ‘रिजेक्ट’ गर्नेसमेत बताएका थिए ।
केहीले भने नकारात्मक सोच भएका व्यक्तिबाट टाढा रहन सलमानलाई सुझाएका पनि छन् । बलिउडमा प्रायः चर्चामा रहने सलमान खानले केही समयअघि लकडाउनका बेला एक म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरेका थिए । सुशान्तले गत जुन १४ मा झुण्डिएर आत्महत्या गरेपछि सुशान्तका फ्यान सलमानमाथि खनिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा उनका फलोअर पनि घटेका छन् ।